Ihe ngosi 10 dị na Galaxy nwere Oku ọrụ: Ekwentị arụnyere na ndabara | Gam akporosis
Oku nke Ọrụ: Ekwentị na-abịa tinye ya na Galaxy Note 10
Nyaahụ E gosipụtara ọnụọgụ nke 10 Galaxy Note, ohuru ohuru ohuru nke Korea. Agbanyeghị na oge gafere awa anyị gara n'ihu ịmara nkọwa gbasara ekwentị ndị a. Akụkọ kachasị ọhụrụ na-ezo aka na egwuregwu nke arụnyere na ekwentị. Ọ dị ka Samsung agbasoro ihe atụ nke afọ gara aga, na nke a na Oku ọrụ: Mobile.
Kpọọ Ọrụ: Mobile bụ nkeji ọhụrụ nke egwuregwu a na saga. Ruo izu ole na ole enwere ike ibudata ya na ahia di iche iche. Ọ dị ka Samsung na-ekwughachi ahụmịhe Fortnite, ịkụ nzọ na egwuregwu a na Galaxy Note 10. Ebe ọ bụ na arụnyere egwuregwu ahụ na ndabara na ekwentị.
Ihe ngosi 10 dị na Galaxy nwere ọtụtụ egwuregwu arụnyere na ndabara. Oge Fortnite kwughachiri dị ka afọ gara aga, ma anyị na-ahụkwa egwuregwu ọhụrụ a. N'ihi ya, ọ dị ka Samsung abanyela nkwekọrịta ọhụrụ maka Oku ọrụ: Mobile ịbịa na njedebe a arụnyere.
Enweghị nkwenye na egwuregwu ahụ ga-abụ naanị na ekwentị Samsung. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe na-egosi, yabụ na ọ ga-abụrịrị atụmatụ na -emepụta ihe. Agbanyeghi na ihu otu o siri diri ha nma na aho ozo na Fortnite, obughi ihe nno n’etiti ha icho imeghari.
Na mgbakwunye, anyị agaghị echefu na Galaxy Note 10 ndị a na-ahapụ anyị ụfọdụ ọrụ akọwapụtara nke ọma maka ndị egwuregwu. Ya mere, ọ gaghị abụ ihe ijuanya na ha webatara Oku ọrụ: Mobile na ekwentị ọhụrụ ha abụọ. Ihe bụ ihe ọzọ, na ekwentị nwere ike ịnwale na ihe ngosi ụnyaahụ, a rụnyere egwuregwu ahụ niile. Ihe dị ka ihe ngosi doro anya.
Maka ugbu a Enweghị nkwenye gọọmentị na nke a. Mana ọ dị ka o doro anya na ndị a Galaxy Note 10 nwere egwuregwu a ka arụnyere na ọ ga-abụ aha ọ ga - abụ naanị. Yabụ ọ bụrụ na ịzụta ekwentị a na akara Korea, ị ga-enwe ike ịkpọku ọrụ: Mobile na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Oku nke Ọrụ: Ekwentị na-abịa tinye ya na Galaxy Note 10
Coolpad dị njikere ugbu a ibido ekwentị 5G mbụ ya